ကြားသိရသမျှ – Media Sharing
ရန်ကုန်ကတော့ ဆရာဝန် အမြင်အရစိုးရိမ်ရေမှတ်နဲ့ နီးနီးလာပြီ
ရန်ကုန်ကတော့ ဆရာဝန် အမြင်အရစိုးရိမ်ရေမှတ်နဲ့ နီးနီးလာပြီ ရန်ကုန်ကတော့ ဆရာဝန် အမြင်အရစိုးရိမ်ရေမှတ်နဲ့ နီးနီးလာပြီ လူတွေလည်း အရင်လို အများကြီး၊ ကားတွေလည်း ပြန်ပိတ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ပြန်ထိုင်ကြ၊ ဆင်‌‌ခြေဖုံးတွေမှာဆို ဘီယာဆိုင်တွေတောင် နေပူသလိုလိုနဲ့ ယင်းလိပ်လေးတွေကာပြီး ဆိုင်မှာ ပြန်သောက်လို့ရပြီ။ ဆိုက်ကားဂိတ်တွေမှာ ဈေးတွေမှာ ပြန်စည်ကားပြီ။ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေလည်း ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းနဲ့ အေးအေးလူလူဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးလို့။ စားဝတ်နေရေး
ဒီလိုယောက်ျားမျိုးလဲ ရှိပါသေးသည် ကျွန်မသူငယ်ချင်းက နှလုံးရောဂါ ရှိတယ် ကလေးယူမရဘူးလို့ ဆရာဝန်မှာထားတယ် သူ့ယောက်ကျားက ကလေးလိုချင်တယ် ကလေးယူပေးလို့ ခနခနပြောတယ် (4.12.2019)သူကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီး ကျွန်မနဲ့ပြောပြလာတယ် ကျွန်မကမယုံဘူးမယုံဘူး နင်ငါရှေ့မာဆီးစစ်ပြဆိုပြီး သူကစစ်ပြပေးတယ် ကျွန်မကပျော်လေပျော်တယ် စိတ်လေပူတယ် သူက ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး ဆရာဝန်လေကလေးယူရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့မှာထားတယ် ကျွန်မစိတ်ပူနေမိတယ်ိကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းသူယောကျာ်းနဲ့ သူပြောပြတယ် သူယောကျာ်းပျော်မယ်လို့ထင်ထားတယ် ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဖျက်ချဖို့ပြောလာတယ်:😭 နင်ပဲလိုချင်တယ်
အလုပျသမား ၃၀ ကြျောလုံးကို တဈယောကျ ဆယျသိနျးစီ ပေးဝတေဲ့ အလုပျရှငျ
အလုပျသမား ၃၀ ကြျောလုံးကို တဈယောကျ ဆယျသိနျးစီ ပေးဝတေဲ့ အလုပျရှငျ ဒီနေ့ တပညျ့တှကေိုမုနျ့ဖိုး တယောကျ ၁၀ သိနျးပေးလိုကျပါပီ. အားလုံးအတှကျ စုစုပေါငျး သိနျး ၃၀၀ ဝနျးကငျြပါ… ကိုယျလညျးအဆငျပွလေို့ ခမျြးသာလို့တော့မဟုကျပါဘူး. ဒါပမေယျ့ သူတို့အတှကျတော့ လိုအပျတာတှအေတှကျထောကျပနျ့မူ့တခု ဖွဈကွပါစေ.. ဘာပဲပွောပွော ဒီလိုပေးရတဲ့ဘဝကို ကနြေပျပါတယျ ယူသောလကျမဖွဈခငျြ ပေးသောလကျပဲ
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းတွေ ထွက်မယ့်အချိန်ကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ… မျှဝေပေးပါဦး
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းတွေ ထွက်မယ့်အချိန်ကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ… မျှဝေပေးပါဦး တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင် စာရင်းများကို သြဂုတ်လ လယ်လောက် မှ သာထွက်ရှိနိုင် မှာဖြစ်ပြီး ဇွန်လ( ၅ )ရက်နေ့ကစတင်ကာ အဖြေလွှာတွေ ကို စစ်တော့မယ် လို့ သိ ရပါတယ် ။ စာမေးပွဲဖြေလွှာ စစစ်တဲ့ နေ့ကစလို့ အောင်စာရင်းပြုစုတဲ့
ဘုရာားပနာ ဖောက်ထွင်း တွေ မသိလိုက်တဲ့ ပုဂံဘုရားတွေမှာ ကျိန်ဆိုထားတဲ့ ကျိန်စာများ
ဘုရာားပနာ ဖောက်ထွင်း တွေ မသိလိုက်တဲ့ ပုဂံဘုရားတွေမှာ ကျိန်ဆိုထားတဲ့ ကျိန်စာများ ပုဂံ က ဘုရားတွေ ဒီတလော အဖေါက်ခံရတယ်။ ဖေါက်တဲ့လူ နားမလည်တာလားတော့ မသိဘူး၊ ပုဂံခေတ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတော့ မရသွားပါဘူး၊ ဘုရားတွေက ၂၀၀၅ ခုနှစ် ပါတ်ဝန်းကျင်က အထွဋ်တင် ပြုပြင်ထားတဲ့ စေတီပုထိုး အသစ်တွေ ဖြစ်နေတယ်။
အပြင်က ပြန်လာမှတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဇနီးသည်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်များနှင့် သေဆုံးသူရဲ့ အချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်… သံလျှင်ကကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုက ကြိုးဆွဲချမသေမှီနဲ့ ကြိုးဆွဲချသေဆုံးပုံကို သေဆုံးသူကိုယ်တိုငိဗီဒီယိုရိုက်ထားတာကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးပေးပြီး အကောင့်ပေါင်းစုံကရေးတင်နေကြတာ တွေ့ရပါတယိ- ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သေဆုံးသူ၏အိမ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရာမှာလည်း သေဆုံးသူ၏ဇနီးက သားသမီးများနဲ့အပြင်ကပြန်လာမှ ကြိုးဆွဲချသေနေတာကို တွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အောက်ပါအတိုင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။ 8-6-2020နေ့ညနေ၅:၃၀အချိန်ခန့်တွင် သံလျှင်မြို့နယ် အေးမေတ္တာရပ်ကွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမကြီး မြရတနာအိမ်ယာ အမှတ်၂၄၁
ဘုရားဘုရား ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေကို အမှန်ထင်ပြီးသာ ခွဲစိတ်လိုက်လို့ကတော့ မတွေးရဲစရာပါ
ဘုရားဘုရား ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေကို အမှန်ထင်ပြီးသာ ခွဲစိတ်လိုက်လို့ကတော့ မတွေးရဲစရာပါ ဘုရားဘုရား ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေကို အမှန်ထင်ပြီးသာ ခွဲစိတ်လိုက်လို့ကတော့ မတွေးရဲစရာပါ ၄.၆.၂၀၂၀ နေ့ခင်း ၁၂ နာရီက ကျွန်တော့အဖွား သွေးသွားစစ်ပါတယ်။ အသက်က ၇၈ နှစ်ရှိပါပြီ။Result ကတော်တော်လေးကို အခြေအနေကဆိုးပါတယ်။ ဆရာဝန်သွားပြတော့ဆရာဝန်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ နောက်ဓါတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာပြန်စစ်ခိုင်းပါတယ်။နောက်စစ်တဲ့ဓါတ်ခွဲခန်းက ၅ ရက်နေ့ ညနေ၆နာရီမှအဖြေရတာပါ။
လမ်းပေါ်မှာ သပိတ်တစ်လုံးနှင့် ဆွမ်းချိုင့်တစ်လုံးချထားတာတွေ့လို့ကြည့်လိုက်သောအခါ…
စစ်ကိုင်းတိုင်း တစ်နေရာ လမ်းပေါ်မှာ သပိတ်တစ်လုံးနှင့် ဆွမ်းချိုင့်တစ်လုံးချထားတာတွေ့တယ်။ ဘယ်သူမှလည်း မစေခိုင်း၊ ဘာအဖိုးအခမှလည်း မရဘဲ ရဟန်းတစ်ပါးက သူဆွမ်းခံကြွချိန်မှာ မိုးရေနှင့် လမ်းတွေပြိုကျနေတာ ခရီးသွားတွေ အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး ပေါက်တူးတစ်ချောင်းနှင့် လမ်းပြင်နေလေရဲ့။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး လျှောက်သင့်တာလျှောက်၊ လုပ်သင့်တာလုပ်ပြီးတော့ “တကာကြီး၊ ဦးဇင်းမျက်နှာပုံနှင့် ဘွဲ့ကိုတော့ မတင်နှင့်နော်၊ သံဃာတော်တွေအားလုံး ဒီလိုလုပ်တတ်ကြပါတယ်လို့ပဲ မမှတ်သညာပြုကြပါစေ” တဲ့။